Fampiharana - Sina Beihai Fiberglass Co., Ltd.
1. Fananganana sy fanamboarana
Ny fiberglass dia manome ny tombony amin'ny tanjaka avo, ny lanja maivana, ny fanoherana ny fahanterana, ny fanoherana ny lelafo tsara, ny insolo akustika sy ny hafanana ary noho izany dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny fananganana sy ny fananganana.
Fampiharana: beton nohamafisina, rindrina mitambatra, varavarankely fanakona ary
haingon-trano, bara vy FRP, trano fidiovana sy fidiovana, dobo filomanosana, lohan-doha, takelaka hazavana, taila FRP, takelaka varavarana sns.
Fiberglass dia manolotra ny tombony amin'ny fahamendrehana dimensional, ny vokatra manamafy tsara, ny lanjan'ny maivana ary ny fanoherana ny harafesina, ary noho izany dia fitaovana iray ho an'ny fitaovana enti-manana fotodrafitrasa.
Fampiharana: vatan'ny tetezana, seranan-tsambo, fananganana tranobe amoron-drano, làlan'ny arabe sy fantsom-pifandraisana.
3.Electrical & Elektronika
Ny fiberglass dia manolotra ny tombony amin'ny fitrandrahana herinaratra, ny fanoherana ny harafesina, ny hafanana ary ny lanjan'ny maivana ary noho izany dia aleony kokoa amin'ny sehatry ny herinaratra sy elektronika.
Fampiharana: tabilao vita pirinty vita amin'ny pirinty, saron-doha mandeha amin'ny herinaratra, boaty switchgear, insulator, fitaovana insulateur, kapila faran'ny motera sy kojakoja elektronika sns.
4. fanoherana ny famotsiana simika
Ny fiberglass dia manome ny tombony amin'ny fanoherana ny harafesina tsara, ny vokatra manamafy, ny fahanterana ary ny fanoherana ny lelafo, ary noho izany dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny fanoherana ny harafesina simika.
Fampiharana: sambo simika, tanky fitehirizana, geogrid anti-corrosive ary fantsom-panafody.
Raha ampitahaina amin'ny fitaovana nentim-paharazana, ny vokatra fiberglass dia manana tombony miharihary amin'ny faharetana, fanoherana ny harafesina, fanoherana ny abrasion ary fiaretana mafana, ary afaka mamaly ny fepetra takian'ny fiara amin'ny lanjany maivana sy tanjaka avo. Noho izany, mihombo ny fampiharana azy amin'ny fitaterana.
Fampiharana: vatan'ny fiara, seza ary vatana misy fiaran-dalamby haingam-pandeha, firafitry ny vatam-paty, sns.
Ny fitambaran-tsiran'ny fiberglass dia manana tombony amin'ny lanja maivana, tanjaka avo lenta, fanoherana ny fiatraikany ary ny fiaretan'ny lelafo, izay ahafahan'ny vahaolana maro mahafeno ny fepetra manokana amin'ny sehatry ny aerospace.
Fampiharana: radome fiaramanidina, faritra aerofoil ary gorodona anatiny, varavarana, seza, fiara mifono solika manampy, faritra misy motera, sns.
7.Energy-save sy fiarovana ny tontolo iainana
Fiberglass dia manolotra ny tombony amin'ny fitehirizana ny hafanana, ny insulation thermique, ny vokatra manamafy tsara ary ny lanja maivana, izay mahatonga azy io ho fitaovana lehibe amin'ny angovo angovo sy ny injeniera fiarovana ny tontolo iainana.
Fampiharana: lelan-turbine sy kapila vita amin'ny rivotra, mpankafy fofonaina, geogrida, sns.
8.Sports sy fialam-boly
Fiberglass dia manolotra ny tombony amin'ny lanja maivana, ny tanjaka avo, ny fahaizan'ny endrika avo lenta, ny fikirakirana tsara, ny coefficient ambany amin'ny fikorontanana ary ny fanoherana ny havizanana, ary noho izany dia be mpampiasa amin'ny vokatra fanatanjahantena sy fialamboly.
Fampiharana: ramanavy tenisy ambony latabatra, battledores (rakotra badminton), tabilao, sifotra, klioban'ny golf, sns.